Public Health in Myanmar: November 2009
(ပြည်တွင်းက သတင်းဂျာနယ် နှစ်စောင်မှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတစ်ခုတွင် သေဆုံးခြင်း သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်မားစွာနဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ မှတ်ချက်တွေ တက်လာလိုက်ကြတာအမျိုးအမျိုးပါပဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ရင်နင့်စရာ ဇတ်လမ်းမျိုး များ အင်္ဂလန်ခေါ် ဘိလပ်ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမှာလဲဆိုတဲ့ လက်တွေ့အခြေပြု စိတ်ကူးပုံရိပ် ကလေးကို တကယ်ကျင်လည် လှုပ်ရှားနေသူတဦးရဲ့ သရုပ်ဖေါ်ချက်အတိုင်း ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပေါ့။)
တခုပါဘဲဗျာ ---- ဘယ်နေရာမဆိုလေ သူ့ စံနစ်နဲ့သူ ကောင်းတာတွေရော ဆိုးတာတွေပါရှိတာဘဲ။
စံနစ်တခုကိုသေသေချာချာ မသိသေးပဲနဲ့ကောင်းပါတယ်လို့အပြင်ကနေပြောတာမျိုးတော့ မကောင်းဘူးဗျာ။
UK NHS (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစေါင့်ရှောက်မှုစံနစ်) မှာ ဒီလိုလူနာရဲ့သွားရာ လမ်းကြောင်းလေး ကြည့်ရအောင်။ ( ) ကွင်းထဲက ကုန်ကျစရိတ်က အစိုးရပေးတာနော် ။ လူနာကတော့ တပြားမှမကုန်
ည ၉နာရီခွဲ ----
လူနာ (က)ကြီး နေမကောင်း
အသက် ၁၅နှစ် မိန်းကလေး အပျို (ယူဆရ)
အဖေက ဖုန်းဆက် - ဂျီပီထံ(UK-NHS တွင် ဒေသန္တရ တာဝန်ကျ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်က ကုသမှုကို စတင်ရပါသည်။)
ည ၁၀နာရီ ခွဲ ----
ဂျီပီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့် - ဆေးရုံကိုဖုန်းခေါ် ( ပေါင်၁၀၀)
ခုမှ နားရလို့ဆိုဖါပေါ် ခြေလေးတင် မိုးဟေကိုရဲ့ပေါင်ဘယ်လောက်လှသလဲ တွေးနေတဲ့surgical registrar (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်) ကကိုင်။
“ အဲ - ဗိုက်နာတာဆိုတော့ တင်ရမှာပေါ့ ” လို့ ဖြေ။
သို့သော် - စကောစက အသက်မို့ကလေးဆောင်တင်ဘို့စီစဉ်။
ဂျီပီ ကို ခဏ စောင့်ခိုင်း ။ ကလေးဆောင်က paed registrar( ကလေးရောဂါကုဆရာဝန်) နဲ့ဈေးညှိ။
ဟိုက - “ အေးလေ တင်လိုက် ။ ရောက်ရင် ငါကြည့်လုပ်လိုက်မယ် ။ ပြီးမှ မင်းခေါ်မယ် ” ဆိုမှ ဂျီပီထံ ပြန်ဆက်
ကဲ ပို့ လိုက်ပေါ့။
ကလေးဆောင်ရောက် ကုတင်တနေရာ ယူ ( တနေ့ပေါင် ၄၅၀ )
paed SHO (ကလေးရောဂါကုဆောင်ဆရာဝန်)က ကြည့်၊သွေးစစ် ဆီးစစ်။ အော်တိုငုတ်တုတ်(အကြမ်းဖျင်း ပေါင် ၅၀ )
မနက် ၂နာရီ ----
အဖြေစုံ Paed registrar က နှမ်းဖြူး- ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ပြန်ခေါ်
အဲဒီ အချိန်မှာ ထက်ထက်မိုးဦး ကိုအိပ်မက် မက်နေတဲ့surgical registrar ( ငနဲ မျိုး အိပ်ရသေးတယ်မထင်ပါနဲ့ခုမှ ခွဲခန်းထဲက ထွက်ရေချိုးပြီးတာပါ ။ ၁၀မိနစ်အနားရ အိပ်တတ်တာ အွန်ကော(အရေးပေါ်တာဝန်)ကြာနေတဲ့လူတွေအကျင့် )
ခွဲခန်းက၊သန်းခေါင်ကျော်ရင်သေရေးရှင်ရေးမှပေးလုပ်တော့ ကဲ-စောင့်စို့ မနက်။
မနက် ၈နာရီ ----
ဘော့စ်( အတိုင်ပင်ခံ-ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ) ရောက်လာ consultant grand round
(Case) ကေ့စ်ပြ။ - ကလေးအဖွဲ့ ကလဲ လူစုံ နဲ့ တွေ့ 
“အေးကွာ - လုပ်လိုက်” ဆိုမှခုန surgical registrarက ခွဲခန်းပြေး ။မေ့ဆေးနဲ့တွေ့။အချိန်ညှိတော့
အဲတော့ ၉နာရီကျော် ဂျူတီဝင်တဲ့ surgical registrar အသစ်ကို သွားပြန်ညှိ ။
ဟိုကလဲ “အေး ငါခွဲပေးပါ့မယ် ။ ဒါပေမဲ့မင်း ဘော့စ်ကို ငါ့ဘော့စ်နဲ့ပြောပေးပါ” ဆိုတော့
consultant ချင်းညှိ ။ မေ့ဆေးက ကြည့်
အားလုံး ရယ်ဒီဆိုမှ ခွဲခန်းခေါ် ( ပေါင် ၁၂၀၀ )
မနက် ၁၁နာရီခွဲရ ကံကောင်း။
အဲလို အဆင့်ဆင့်ကြားမှာ ဆရာဝန်ဘယ်နှစ်ယောက် လက်ပြောင်းလဲ လိုက်ရေကြည့် နော်။
ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲ - ကိုယ့် ဟာကို တွက်တော့။
လူနာက မပေးရဘူးလို့ တော့ မပြောနဲ့ ဗျ။ အဲဒါ - လူထု အခွန်တွေ
ခွဲတယ်။ သေပြီဆိုပါတော့(အခုနတုံးကတော့ ရှည်လာပြီးမှ တိုချင်တော့လည်း ကိုရီးယားကား ဇတ်သိမ်းတာ ကျနေတာပဲ)
ဒီမှာ- စုစုပေါင်း ဌာနကြီး ၄ခု ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီ
ဌာနကြီး(၁) - http://www.ncepod.org.uk/
၁)ကုသချက်မှတ်တမ်း နဲ့ အဲဒီ အချိန်မှာ ပါဝင်တဲ့ 
ဆရာဝန်အားလုံး (မေ့ဆေး ၊ခွဲစိတ်နဲ့လက်ထောက်) တို့ ရဲ့ 
သူတို့ နဲ့အဆင့်တူ ဆရာဝန် ၂ယောက်စီကို ပို့ ရတယ် ။
(မေ့ဆေးခွဲစိတ်နဲ့ နောက်ကြည့်တဲ့physician)ဆိုတော့
အားလုံး ၆ယောက်စီပို့ ရတယ် ။
(အဲဒီ လူတွေဟာ ပထမ လူ၃ယောက်နဲ့လုံးဝ မပတ်သက်တဲ့ သူတွေလဲ ဖြစ်ရမယ် )
independent assessor( ၆ယောက်) - သူတို့ဆီကနေမှ-မှတ်ချက်ကို
ဆရာဝန်၃ဦးထက်မနည်းသော အဖွဲ့ ငယ်က စစ်ရပါတယ်။
သူကနေ လိုအပ်သလို ဌာနတွင်းစစ်ဆေးဘို့အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
ဋ္ဌာနကြီး ၂ -- http://www.gmc-uk.org/concerns/hearings_and_decisions/fitness_to_practise_decisions.asp
သူ့ဆီ ကို တိုင်တာမှာ-
လူနာရှင်၊ အပြင်လူ နဲ့အထက်က စစ်ဆေးချက်တွေ - တခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အဲအခါမှာ အစွပ်စွဲခံရတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ မိမိ ရဲ့ရှေ့ နေနဲ့ရုံးတက်ရပါတယ် ။
ဋ္ဌာနကြီး ၃ - Coroner's office performing coroner's inquest
သူကတော့ သက်သေတွေရောဆေးမှတ်တမ်းကိုပါ စစ်ဆေးခွင့်ရှိပြီး၊ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ
guilty of criminal negligence
တကယ်လို့ guilty of criminal negligence ဖြစ်မှ
ဋ္ဌာနကြီး ၄ - တရားရေးဋ္ဌာန
တရားရုံးကနေ စစ်ဆေးပြီး အပြစ်ရှိက အပြစ်ပေး
ဒါဟာ ယူကေရဲ့ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ပုံပါ
Posted by Dr.Nay Oo (Burma) 12 comments
Labels: Medical negiligence, UK
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလက ထုတ်ပြန်ထားသော အခန်း ၁၅ ခန်းပါသည့် ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေ ရှိသည်ကို မသိခြင်းသည် ဥပဒေကို မလိုက်နာရန် အကြောင်းမဟုတ်ပေ။
အရောင်ဖြင့် မှတ်သားထားသော စာပိုဒ်များမှာ လတ်တလော ဆွေးနွေးနေကြသော ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ် ပေါ့လျော့မှု၊ အရည်အချင်း မပြည့်ဝမှု စသည့် အကြောင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်ဝတ္တရား နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Medical Council Law
(The State Peace and Development Council Law No.1/2000)
The 9th Waxing Day of Pyatho, 1361 M.E.
(14th January, 2000)
1. This Law shall be called the Myanmar Medical Council Law.
2. The following expressions contained in this Law shall have the meanings given
(a) Medical Science means branch of studies related to all health care activities including upgrading of health status, prevention of disease, diagnosis of disease, treatment of disease, rehabilitation and research;
(b) Council means the Myanmar Medical Council formed under this Law;
(c) Council Member means any member of the Myanmar Medical Council;
(d) Registration Certificate means registered medical practitioner certificate granted under this Law by the Myanmar Medical Council;
(e) Registered Medical Practitioner meansaperson whose name has been entered in the medical practitioners’ registration list and has been granted medical practitioner registration certificate;
(f) Medical Practitioner Licence meansaGeneral Medical Practitioner Licence, Special Medical Practitioner Licence and Limited Medical Practitioner Licence granted under this Law by the Myanmar Medical Council;
(g) General Medical Practitioner Licence meansamedical practitioner licence granted by the Myanmar Medical Council to the registered medical practitioner
who has obtainedarecognized basic medical science degree and has completed the prescribed interne period;
(h) Special Medical Practitioner Licence meansamedical practitioner licence granted by the Myanmar Medical Council toaqualified registered medical practitioner who has obtainedarecognized post- graduate degree or postgraduate diploma andaregistered medical practitioner who is determined as being qualified and having expertise in the relevant branch of medical science;
(i) Limited Medical Practitioner Licence meansamedical practitioner licence granted by the Myanmar Medical Council toaforeigner medical practitioner limiting the branch of medical science in which practice is allowed, the locality in which and the period during which practice is allowed.
(a) to enable the public to enjoy qualified and effective health care assistance;
(b) to maintain and upgrade the qualification and standard of the health care assistance of medical practitioner;
(c) to enable studying and learning of the medical science ofahigh standard abreast of the times;
(d) to enableacontinuous study of the development of the medical science by the medical practitioners;
(e) to maintain and promote the dignity of the medical practitioners;
(f) to supervise the abiding and observing in conformity with the moral conduct and ethics of the medical practitioners;
Formation of the Myanmar Medical Council
4. The Minister for the Ministry of Health shall:-
(a) with the approval of the government form the Myanmar Medical Council
comprising the following persons:-
(1) the respective Directors -General under the Ministry of Health:
(2) Director of Medical Service, Ministry of Defence;
(3) Rectors of the Institutes of Medicine;
(4) Rector of Tatmadaw Institute of Medicine;
(5) Chairman of the Myanmar Medical Association;
(6) Heads of States and Divisions of the Department of Health;
(7) Professors/Heads of Faculty of Forensic Medicine, Institutes of Medicine;
(8) one Professor-cum -head of Faculty of Forensic Medicine, Tatmadaw Institute of Medicine;
(9) one senior Professor-cum -medical practitioner from each Institute of Medicine;
(10) one senior Professor-cum-medical practitioner from the Tamadaw Institute of Medicine;
(11) three representatives from the Myanmar Academy of Medical Science;
(12) three retired medical practitioners;
(13) one non-government servant medical practitioner elected by medical practitioners holding licence from respective States and Divisions.
(b) in forming the Council under sub-section(a),aChairman,aSecretary andaJoint Secretary shall be determined.
5. The Council may assign duty asaTreasurer to any Council member. If no such
assignment has been made, the Secretary of the Council shall act as Treasurer.
6. The Minister for the Ministry of Health shall form the Executive Committee comprising the following persons to carry out the duties and functions of the Council:-
(a) Chairman of the Council - Chairman
(b) Two Council Members - Vice-Chairmen
(c) Ten Council Members - Members
(d) Secretary of the Council - Secretary
(e) Joint-Secretary of the Council - Joint-Secretary
7. (a) The tenure of the Council for one term shall be four years commencing from the date of its formation.
(b) The term of office of the Council members shall be the same as the tenure of the Council.
(c) A Council member may act as such only for three consecutive terms.
(d) Whenavacancy occurs in the post of any Council member it shall be filled by substitution or election as contained in sub-section(a) of section 4.The term of office the Council member so appointed shall be till the expiry of the tenure of the existing Council.
(e) The Council shall, on the expiry of its terms of office, carry out the function till the formation ofanew Council.
8. The formation of the Council, the formation of the Executive Council, holding of meetings and financial matters shall be carried out in accordance with the stipulations.
9. The duties of the Council are as follows:-
(a) recognition or refusal of recognition of medical degrees conferred by any local or foreign Institute of Medicine or Medical College or any other organization formed for the purpose of medical science;
(b) issuing notification form time to time on the medical degrees recognized by the Council;
(c) determining moral conduct and ethics to be observed by the medical practitioners and supervision thereof;
(d) compiling and keeping the list of registered medical practitioners and the list of licensed medical practitioners and publishing the said lists from time to time;
(e) studying, examining, taking appropriate action and communicating with the Government departments and organizations to enable maintaining and upgrading of the qualification and standard of the medical practitioners in the performance of health care;
(f) prescribing necessary norms and standards for maintaining and upgrading the level of health care of the State-owned and private hospitals and clinics, and submitting suggestion thereof to the Ministry of Health;
(g) submitting suggestions, after studying and reviewing the teaching systems of medical science which are being developed and changed ,to the Ministry of Health for upgrading the standard of teaching medical science and emergence of qualified medical experts;
(h) submitting suggestions to the Ministry of Health for enabling medical practitioner to study medical education continuously in conformity with the health care requirements of the State;
(i) submitting suggestions to the Ministry of Health for upgrading health care and standard of medical science;
(j) investigating, examining and taking action in case of failure to abide by and observe in conformity with the moral conduct and ethics of the medical practitioner.
10. The powers of the Council are as follows:-
(a) forming the following committees and prescribing the functions and duties thereof:-
(1) Committee for Scrutiny of Registration Certificate and Medical Practitioner Licence;
(2) Committee for Observance of Moral Conduct and Ethics;
(3) Committee for Maintenance of Discipline;
(4) Standardization Committee;
(5) Committee for Continuous Medical Education;
(6) Health Committee;
(7) Other necessary committees;
(b) issuing, refusing to issue and cancelling registration certificate;
(c) issuing refusing to issue, cancelling and revoking subject toatime limit of medical practitioner licence;
(d) determining the tenure, extending the tenure and refusing to extend the tenure of medical practitioner licence;
(e) communicating and cooperating, with the approval of the Ministry of Health, with international, regional, Local and foreign government departments, organizations and experts on matters that will prove beneficial to the State and the Council;
(f) prescribing and collecting the registration fees, liences fees, extension of tenure of medical practitioner licence fees and late fees;
(g) exercising the other powers conferred from time to time by the Ministry of Health for successful implementation of the objectives of the Council.
Rights of the Members of the Council and Members of the Executive Committee
11. The rights of the members of the Council and members of the Executive Committee are as follows: -
(a) having the right to enjoy the benefits prescribed by the State from time to time;.
(b) having the right to receive travelling allowance actually incurred and daily subsistence allowance prescribed from time to time if travelling on duty is involved;
(c) having the right to receive remuneration prescribed from time to time if attending meetings relating to the Council is involved.
Cessation of Membership of Council
12. If any of the following events has occurred, the Council shall, with the approval of the Ministry of Health, cease the Membership of any member: -
(b) failure to attending the meeting for three consecutive times without applying for leave to the Council;
(c) going abroad for six months and above without applying for leave;
(d) cancellation from the medical practitioners’ registration list;
(e) cancellation of the medical practitioner licence or revocation of the same subject toatime limit;
(f) action being taken and subsequently convicted for any offence relating to misconduct or affecting security of the State;
(g) finding by the Council on examination to have failed to observe the moral ethics.
13. The meetings shall be held as follows
(a) holding regular meeting of the Council once in every three months and holding extraordinary meeting when necessary;
(b) holding the Executive Committee meeting onceamonth and holding extraordinary meeting when necessary;
(c) submitting the activities of the Executive Committee to the nearest regular meeting of the Council and obtaining the approval thereof;
14. The Council and the Executive Committee shall report their activities to the Ministry of Health once in every three months regularly. In addition, they may report as may be necessary from time to time.
Formation of Staff Office and Assigning Duties Thereto
15. In order to carry out the functions and duties of the Council and the Executive Committee, the Council shall, with the permission of the Ministry of Health form the Staff Office as follows: -
(a) appointingaHead of Staff Office andaDeputy Head of Staff Office and assigning duties thereto;
(b) constituting the staff as may be necessary and assigning duties there to.
16. The Ministry of Health shall bear the expenditures of the Council, the Executive Committee and the Staff Office.
17. The Council may, with the approval of the Ministry of Health, accept donations, property and other assistance from organizations and donors locallyand abroad.
18. The Council shall accept, utilize and keep the accounts of income and expenditure in accordance with the existing financial rules and directives.
Registration Certificate of Medical Practitioner
19. Any of the following persons desirous of obtaining the registration certificate may apply to the Council in accordance with the stipulations; -
(a)aperson who has obtained the degree of medical science conferred by any local Institute of Medicine;
(b)aperson who has obtained the degree of medical science conferred by any foreign Institute of Medicine, any Medical College or any organization formed for medical education and also recognized by the Council
(c)aperson who has obtainedadegree conferred by any foreign Institute of Medicine, any Medical College or any organization formed for medical education but not yet recognized by the Council.
20. The Council may, after scrutinizing the application made under section 19 in accordance with the stipulations and causing the registration fees to be paid, issue or refuse to issue the registration certificate.
21. The Council shall ,in respect of any registered medical practitioner, cancel from the registration list on finding out that any of the following events has occurred: -
(a) using narcotic drugs and psychotropic substances;
(b) being convicted by the Court for any offence related to the moral conduct and ethics ofamedical practitioner and determined by the Council as being not suitable to continue serving asamedical practitioner;
(c) although not convicted byaCourt, perversion of moral conduct and ethics ofamedical practitioner and being not suitable to continue serving asamedical practitioner;
(d) surrendering the citizenship, cessation or revocation of citizenship, or adopting the citizenship of other country.
Medical Practitioner Licence
22. The registered medical practitioner desirous of performing medical practice shall apply to the Council to obtain the General Medical Practitioner Licence in accordance with the stipulations.
23. The Council may, after scrutinizing the application made under section 22 in accordance with the stipulations and causing the licence fees to be paid, issue or refuse to issue the General Medical Practitioner Licence.
24. The registered medical practitioner who has already obtained the General Medical Practitioner Licence and is fully qualified may apply to the Council to obtain the Special Medical Practitioner Licence.
25. The Council may, after scrutinizing the application made under section 24 in accordance with the stipulations, and causing the licence fees to be paid, issue or refuse the Special Medical Practitioner Licence.
26. A foreign medical practitioner desirous of performing medical practice in the Union of Myanmar shall apply to the Council to obtain the Limited Medical Practitioner Licence in accordance with the stipulations.
27. The Council may, after scrutinizing the application made under section 26 in accordance with the stipulations, and causing the licence fees to be paid issue the Limited Medical Practitioner Licence limiting the branch of medical science in which practice is allowed, the locality in which practice is allowed and the period during which practice is allowed or refuse to issue.
28. A General Medical Practitioner Licence holder or Special Medical Practitioner Licence holder desirous of continuing his medical practice after expiry of the tenure of the medical practitioner licence shall apply to the Council in accordance with the stipulations for the extension of the tenure of his licence before the expiry of the tenure of the relevant medical practitioner licence.
29. The Council may, after scrutinizing the application made under section 28 in accordance with the stipulations for the extension of the tenure of medical practitioner Iicence, extend the tenure or refuse to extend the tenure.
30. The Council may, in respect of any medical practitioner holding medical practitioner licence, cancel the medical practitioner licence or revoke it subject toatime limit on finding out that any of the following events has occurred;-
(a) being cancelled from the medical practitioner registration list;
(b) being unable to carry out the functions and duties ofamedical practitioner due to mental illness, being devoid of knowledge or physical disability;
(c) failure to carry out the duty assigned by the State;
(d) carrying out the duties ofamedical practitioner inconsiderately and negligently;
(e) failure of compliance and observance in conformity with the moral conduct and ethics ofamedical practitioner;
(f) being unable to carry out in accordance with the qualification ofamedical practitioner;
(g) failure to extend the tenure of the medical practitioner licence without sufficient ground during the period determined by the Council.
Duties and Rights of the Registered Medical Practitioner and the Medical Practitioner Licence Holder
31. The registered medical practitioner: -
(a) shall abide by the rules, procedures, notifications, orders and directives issued under this Law;
(b) shall observe the moral conduct and ethics of medical practitioner prescribed by the Council;
(c) hasaright to advise the Council for progress and achievement of the functions and duties of the Council;
(d) hasaright to submit his grievances of the Council and may also havearight to obtain the advice of the Council.
32. The medical practitioner licence holder hasaright to carry out the medical practice according to the type of licence which he holds in accordance with the stipulations.
33. In electing the member of Council contained in clause (13) of sub-section (a) of section (4) the medical practitioner licence holder: -
(a) has the right to vote;
(b) has right to be elected asamember of Council if he possesses qualification determined by the Council.
34. A person dissatisfied with an order or decision passed under section 20 or section 23 or section 25 or section 27 or section 29 or under section 30 that the medical practitioner licence is revoked foraperiod under5years by the Executive Committee may file an appeal to the Council within 60 days from the date of passing such order or decision.
35. The decision of the Council passed in an appeal under section 34 shall be final and conclusive.
36. A person dissatisfied with an order or decision passed under section2l or under section 30 that the medical practitioner licence is revoked foraperiod of5years and above or cancelled by the Executive Committee may file an appeal to the Minister for the Ministry of Health within 60 days from the date of passing such order or decision.
37. The decision of the Minister for the Ministry of Health passed in an appeal under section 36 shall be final and conclusive.
38. No one shall give medical treatment withoutamedical practitioner licence granted by the Council under this Law.
39. No medical practitioner licence holder in performing the medical treatment work, shall assign duty to any other person except one who has obtainedalicence, registration certificate, permit, certificate of completion of attendance ofatraining course or documents granted by the relevant department, organization that he is skillful in the relevant medical treatment work.
40. No registered medical practitioner shall use the terms and expressions which are inappropriate with the degree which he has obtained, rank and technical know-how together with his name.
41. Whoever violates the prohibition contained in section 38 shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extend to5years and may also be liable toafine.
42. Any medical practitioner holding the medical practitioner licence who violates the prohibition contained in section 39 shall,on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extend to5years or with fine or with both.
43. Any registered medical practitioner who violates the prohibition contained in section 40 shall, on conviction ,be punished with imprisonment foraterm which may extend to3years or with fine or with both.
44. The provisions contained in this Law shall not apply to persons who have the right of medical treatment under any other existing law.
45. A medical certificate which is not signed byamedical practitioner licence holder himself shall not be deemed to bealegal medical certificate.
46. In prosecuting an offender under section 42 or section 43 of this Law, prior sanction of the Ministry of Health shall be obtained.
47. Rules, orders and directives issued under the Myanmar Medical Act,1957 may continue to be applicable in so far as they are not inconsistent with this Law.
48. Funds owned by the Union of Myanmar Medical Council formed under the Myanmar Medical Act,1957 movable and immovable property, works which are in the processes of being performed, works which have been completed, assets and liabilities shall devolve respectively on the Council.
49. The Union of Myanmar Medical Council formed under the Myanmar Medical Act, 1957 may continue to carrying out its duties and powers until the formation of the Myanmar Medical Council under this Law.
50. For the purpose of carrying out the provisions of this Law: -
(a) the Ministry of Health may, with the approval of the Government, issue such rules and procedures as may be necessary;
(b) the Ministry of Health and the Council may issue such notifications orders and directives as may be necessary.
51. The Myanmar Medical Act, 1957 is hereby repealed.
Sd ./-Than Shwe
Posted by Ye-Mon6comments
Labels: Law, Medical negiligence
Posted by Khin Ma Ma Myo 21 comments
မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာအချို့ စည်းဘောင်လွတ်နေခြင်း
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်တွင်းက သတင်းဂျာနယ် နှစ်စောင်မှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတစ်ခုတွင် သေဆုံးခြင်း သတင်းကို ဖတ်မိပြီး ဤဆောင်းပါးကို ရေးရန် အကြံဖြစ်ပါသည်။
သတင်းအကျဉ်းမှာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပြီးစ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသည် ဗိုက်နာသဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် သွားရောက်ပြသသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးက စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး အူအတက်ရောင်ရောဂါ ရှိသည်ဟု ဆိုကာ ခွဲစိတ်ကုသသည်။ ခွဲစိတ်ကုသအပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် အမျိုးသမီးငယ် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ သတင်းနှစ်ပုဒ်လုံး၏ သုံးသပ်ချက်မှာ ဆရာဝန်၏ အမှားကြောင့် အမျိုးသမီးငယ် အသက်ဆုံးရှုံးရသည်ဟု ဆိုထားပြီး နောင်တွင် အလားတူ အမှားမျိုးမဖြစ်ရန် အကြံဥာဏ် ပေးထားလေသည်။
သတင်းဆောင်းပါး အကျယ်ကို အောက်ပါ ဂျာနယ်နှစ်စောင်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် တရားဥပဒေ ရှုထောင့်နှင့် ဆေးပညာရှုထောင့် တို့မှကြည့်၍ ပြန်လည် ဆွေးနွေးလိုသည်။
(၁) သတင်းနှစ်ပုဒ်လုံး၏ အရင်းအမြစ်သည် ကွယ်လွန်သွားသော အမျိုးသမီးငယ်၏ မိခင်ထံမှ ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့က လွှဲအပ်သော ရှေ့နေတို့၏ တိုက်ရိုက် ပြောဆိုချက်များ မပါဝင်။ (မိခင်က တဆင့်ပြောသော ဆေးရုံ၏ အစုရှယ်ယာ ပါဝင်သူတစ်ဦး၏ ပြောဆိုချက်သည် hearsay evidence ဖြစ်သဖြင့် သက်သေအဖြစ် တင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။) ထို့ကြောင့် မျှတမှု ရှိသော သတင်းများ မဟုတ်ပေ။
(၂) သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်းကို ရင်ခွဲစစ်ဆေးသည့် ဆေးစစ်ချက် (Post-Mortem report) မပါရှိ။ Death certificate ( သေစာရင်း ) တစ်ခုတည်းသည် သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်းအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် အထောက်အထား မဖြစ်ပါ။
(၃) ဆရာဝန်၏ မကျွမ်းကျင်မှု (သို့မဟုတ်) ပေါ့လျော့မှု ဖြစ်မဖြစ်ကို ဘက်လိုက်မှုမရှိသော (၄င်းပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံနှင့်၎င်း၊ ကုသသော ဆရာဝန်နှင့်၎င်း၊ လူနာရှင်နှင့်၎င်း တစုံတရာ ပတ်သက်မှု မရှိသည့်) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိ။
(၄) မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်အရ တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု စီရင်ခြင်း မခံရသေးသရွေ့ တရားစွဲဆိုခံရသူအား အပြစ်မရှိဟု မှတ်ယူရမည်ဆိုသော “Innocent until proven guilty” ဆိုသည့် မူကို ဆန့်ကျင်နေသည်။ (စကားချပ်။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဖို့ဒ်ဟုဒ်စစ်စခန်းတွင် စစ်သား ၁၃ ဦးကို သေစေမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံနေရသော ဗိုလ်မှုးဟာဆန်အား မျက်မြင်သက်သေများ အများအပြားရှိနေစေကာမူ တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ယခုအချိန်အထိ စာနယ်ဇင်းများက “Accused” ဟူသည့် စကားလုံးဖြင့်သာ သုံးနှုန်းပြီး အပြစ်ရှိသူဟု မသုံးနှုန်းကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။)
(၁) အပေါ်သွေး ၉၀ နှင့် အောက်သွေး ၆၀ သည် ကိုယ်အလေးချိန်နည်းသော မြန်မာ အမျိုးသမီးများ အဖို့ ပုံမှန်ရှိသော သွေးပေါင်ချိန် ဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးငယ်၏ နေထိုင်မကောင်း မဖြစ်မီက ရှိသော သွေးပေါင်ချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားရန်လိုသည်။ သာမာန်အားဖြင့်မူ အပေါ်သွေး ၉၀ နှင့် အောက်သွေး ၆၀ သည် သွေးပေါင်ချိန် နည်းနေသည်ဟု မဆိုသာ။
(၂) Acute abdomen - ရုတ်တရက်ဖြစ်သော ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ ရောဂါအုပ်စု၏ လက္ခဏာများမှာ ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။ သေစာရင်း Death certificate တွင်ပါရှိသော ရောဂါအမည် သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည့် Mesenteric lymphadenitis (အူရှိ ပြန်ရည်ကျိတ်ရောင် ရောဂါ) နှင့် Acute appendicitis (အူအတက်ရောင်ရောဂါ) ရောဂါ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရုတ်တရက်ဖြစ်သော ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့် ရောဂါ အုပ်စုတွင် အကျုံးဝင်သဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာ ဆင်တူသည်။ ၀မ်းဗိုက်ကို ဖိလျင် နာခြင်း (tenderness) သည် ၄င်း Acute abdomen ရောဂါအုပ်စု၏ လက္ခဏာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကုသပုံမှာ ကွဲပြားသည်။ အူအတက်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်လျှင် ခွဲစိတ်ကုသမှသာ ပျောက်ကင်းရန် အခွင့်အလန်းများပြီး ပြန်ရည်ကျိတ်ရောင်ခြင်း အတွက်မူ ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်လေ့မရှိ။
(၃) ခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက် အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်ပါက မိဘ (သို့) အုပ်ထိမ်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်လိုသည်။ ထိုခွင့်ပြုချက်တွင် ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို သိရှိနားလည်ကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြုကြောင်းပါရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် ဆရာဝန့် သဘောပါဟု ဆရာဝန်ကို ပုံအပ်တတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ် ဖြစ်သင့်သည်မှာ ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင် (သို့) ဆရာဝန်က လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော သူနာပြု က ခွဲစိတ်ခြင်း၏ အကျိုး၊ အပြစ်တို့ကို လူနာရှင်အား သေသေချာချာနားလည် သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပြီး လူနာရှင်က ဆုံးဖြတ်ချက် ချရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဆေးပညာရှင်များဖက်က လူနာနှင့် လူနာရှင် နားလည် သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်း ပြောပြရန် တာဝန်ရှိပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်၏ အကျိုးဆက်ကို ခံစားရန်မှာ လူနာနှင့် လူနာရှင်ဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသချက်တွင် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိမရှိကမူ ခွဲစိတ်ကုသသူ ဆရာဝန်၏ တာဝန်ဖြစ်ပေမည်။
(၄) “တီဗွီဓာတ်မှန် မရိုက်၊ သွေးမစစ်ပဲ ခွဲစိတ်ခန်းထဲ ပို့လိုက်တယ်” ဟု လူနာရှင် မိခင်က ပြန်လည်ပြောပြကြောင်း သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။ ဤအချက်မှာ အတိအကျ မှန်မမှန် ပြောရခက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှု အတွက် ပြင်ဆင်တိုင်း သွေးအမျိုးအစား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သွေးအရန်သင့်ထားခြင်းတို့က မဖြစ်မနေ လုပ်ရမည့်ကိစ္စများပင်။ ထိုသို့ မလုပ်ဆောင်ခဲ့သော် ဆရာဝန်ဖက်က “ပေါ့လျော့မှု” ရှိသည်ဟု ပြောမည်ဆိုက ပြောနိုင်သည်။ တီဗွီဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်းသည် ဤရောဂါအတွက် အကောင်းဆုံး စစ်ဆေးချက် ဟုတ်မဟုတ် ကျွန်တော် မပြောတတ်ပေ။ သို့ရာတွင် လူနာကို လက်ဖြင့် စမ်းသပ်ရုံတင်မကပဲ ထပ်မံအတည်ပြုသည့် စစ်ဆေးချက် ( ဥပမာ - ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ) ကို ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေပေးပါက ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ အထက်ပါအချက်မှာ ကျွန်တော်၏ ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပြီး ပို၍ ဖြစ်သင့်သည်မှာ မခွဲစိတ်မီ လုံလောက်သော စမ်းသပ် စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကို ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များပါသည့် (တရားဥပဒေ ရှုထောင့် အချက် - ၃ ပါ) ဘက်လိုက်မှုမရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့က အဆုံးအဖြတ် ပေးရပေမည်။
ပြန်လှန် ဆွေးနွေးချက်ကို အချုပ်ဆိုရသော် သတင်းပါ အချက်အလက်များသည် ဆရာဝန်တွင် အပြစ်ရှိသည် (သို့မဟုတ်) မရှိပါဟု ပြောဆိုရန် မလုံလောက်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ထို့အပြင် တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်ပြီး ဆရာဝန်တွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု စီရင်ချက် မချမှတ်သေးသောကြောင့် ဥပဒေသဘောအရ ယခုပစ္စုပ္ပန်အချိန်တွင် ဆရာဝန်၌ အပြစ်မရှိဟု မှတ်ယူရပေမည်။
တိုင်းပြည်၏ မျက်စိနှင့် နားသဖွယ်ဖြစ်သော သတင်းမီဒီယာအချို့၏ သတင်းဆောင်းပါး ရေးသားသူများက ဥပဒေရှေ့က တင်ကြို၍ အဆုံးအဖြတ်ပေးနေခြင်းသည် တရားစည်းဘောင်လွတ်နေကြောင်း ထောက်ပြလိုက်ရပါသည်။
လူမှုရေး ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းမှ ကြည့်၍ ကောက်ချက်ချသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ အတွက်မူ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မပြောသာပေ။ ဤဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်၏ ကောက်ချက်များနှင့် Prejudice ( ဥပဒေ ရှေ့က တင်ကြိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း ) တို့ကို လုံးဝ သဘောမတူ စေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်ကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေဖို့ ဆေးဝန်ထမ်းများသာမက ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနှင့် သတင်းမီဒီယာများတွင်ပါ တာဝန်ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။
ပြန်လှန် ဆွေးနွေးလိုပါက မှတ်ချက်တွင် ရေးသားပေးသွားပါရန် မေတ္တာရပ်ပါသည်။ စီဘောက်စ်တွင် ဆွေးနွေးရ ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ye-Mon 374 comments
Labels: Law, Medical negiligence, OpEd
Down's Syndrome ဆိုတာဘာလဲ ?
ဒီရောဂါကို တစ်ချို့က ပြုစားခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ တောရွာတွေဖက်မှာဆို လူပြုစားသလိုလို စုန်းနဲ့ပဲလုပ် သလိုလိုနဲ့ ပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ Down's Syndrome အကြောင်းမပြောခင် အရင်ဆုံး Karyotyping ဆိုတာဘာလဲ ရှင်းပြပါမယ် ။ Chromosone အရေအတွက်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် တစ်စုံပါဝင်တဲ့ Cellular chromosone profile တစ်ခုကို Karyotype လို့ခေါ်ပါတယ် ။ လူတွေမှာ Chromosone အပြည့်အစုံ 46 ခုရှိပါတယ် ။ တူညီတဲ့ Gene တွေပါဝင်တဲ့ Homologous autosomes ၂၂စုံပါဝင်ပြီး မျိုးပွားအင်္ဂါ ခရိုမိုစုန်း တစ်စုံပါဝင်ပါတယ် ။ မိန်းမကလေးမှာ 46XX ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးမှာ 48XY ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီလို Chromosone အရေအတွက် သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ချို့ ယွင်းချက်ရှိနေတာကို Abnormal Karyotype လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Down ရောဂါဟာ Abnormal Karyptype ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သူက 47XY(+21) ဖြစ်နေပါတယ် ။ +21 ကတော့
ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ Down's Syndrome ရဲ့ ၉၅%ဟာ အမေဖက်က နေပြီး
ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂ - ၃ % မှာတော့ Trisomy 21 ဟာ Genetic ပစ္စည်းတွေကို Chromosone တစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့နေရာ Translocations မှာဖြစ်ပါတယ် ။
Down's Syndrome ရဲ့ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုက အသက်အရွယ်မျိုးစုံမှာ ၆၅၀ မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ။
Down's Syndrome ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ ?
အပေါ်မျက်ခွံပြားခြင်း ၊ လန်ခြင်း ၊ မြောင်းပါရှိခြင်း (Palpebral fissures)
နားရွက်တစ်စုံမှာ သေးငယ်၍ အောက်သို့အနည်းငယ်နိမ့်ခြင်း
မျက်ကြည်လွှာတွင် Brushfield အစက်ပါရှိခြင်း
လက်သန်းလေးမှ အတွင်းဖက်သို့ ကွေးနေခြင်း(Clinodactly)
အရိုးအဆစ်များ လွန်စွာပျော့ပြောင်း၍ ကွေးရခြင်း
ချို့ယွင်းချက်များရှိခြင်း (ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ် )
ပုံမှန်ထက်အားနည်း၍ tone လျော့နေခြင်း ( Hypotonia)
လက်ဝါးပြင်ပေါ်တွင် အကြောင်းတစ်ကြောင်းသာပါရှိခြင်း ( Single Palmar Crease)
လက်ထိပ်လေးများတွင် သာမန်ထက် အရစ်များပိုပါရှိခြင်း
လက်တွေက တိုပြီးကျယ်တဲ့အတွက် လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြားက ထောင့်ဟာ ၆၀%ထက်ကျော်နေခြင်း (ပုံမှန်ဆို ၆၀% လောက်ပဲရှိပါတယ် )
အရွယ်အစား ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Down တွေနဲ့တွဲနေတဲ့ ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ ?
၁ ။ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများ (၄၀%)
၂ ။ မွေးရားပါ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှုမမှန်မှုများ
၃ ။ အဆုပ်ရောင်ရောဂါ အပါအ၀င် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းများ ခဏခဏ ခံရခြင်း
၄ ။ သိုင်းရွက် ဟော်မုန်းနည်းခြင်း ( Hypothyrodism)
၅ ။ သွေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Down's Syndrome ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ ?
တိကျတဲ့ သီးခြားကုသမှု ရယ်လို့မရှိပါဘူး ။ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ Down ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ Chromosonal analysis (Karyotyping ) လုပ်ခြင်း အားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ် ။
ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ ?
၁ ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အစီအစဉ်တွေကို စောစောစီးစီးစတင်ရပါမယ် ။
၂ ။ အသက်နဲနဲကြီးတဲ့ ကလေးတွေကို စကားပြောရာတွင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ။
၃ ။ အထူးသီးသန့်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း ။
၄ ။ ဆက်နွယ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း ။ (နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း ၊ မျက်စိ ၊ နှလုံး စစ် ဆေး ခြင်းများ ၊ သိုင်းရွက် ဟော်မုန်းစစ်ဆေးခြင်း )
၅ ။ ဆက်နွယ်လျက်ရှိတဲ့ ရောဂါများကို ကုသပေးခြင်း ။ (မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ ၊ အစာအိမ်အူလမ်း ကြောင်းရော ဂါများကို ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်း ၊ ရောဂါပိုးမ၀င်အောင် ကာကွယ်ခြင်း ၊ သွေးကင်ဆာကုသခြင်း )
၆ ။ မိဘများပါ ပါဝင်လုပ်ဆောင်၍ ဆွေးနွေးခြင်း ။
ရ ။ ရေရှည်ဖြစ်ပွားနိုင်သော အခြေအနေများကို သိရှိနားလည်ခြင်း ။
၈ ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း ။
၉ ။ Genetic နှင့်ပါတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးခြင်း (ဘယ်လို ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ ၊ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်နှုန်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘ၀ထဲက မိမိကလေးဟာDown ဟုတ်မဟုတ် သိရှိနိုင်ခြင်း ) စတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၁၁း၃၀ ည ၂၂.၁၁.၀၉)
Ref: Handbook for Undergraduate Medicine (Child Health , IM II)
Labels: Child health, Child psychology, Congenital disorder, Down' syndrome
Posted by သက်တန့်ချို6comments